WAR DEG DEG AH+AKHRISO: Puntlandtimes oo heshay Cidii ka dambeysay Dhacdadii Cadaado & Ujeedada laga leeyahay? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
WAR DEG DEG AH+AKHRISO: Puntlandtimes oo heshay Cidii ka dambeysay Dhacdadii Cadaado & Ujeedada laga leeyahay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Goor siihoreysay oo saaka ah baarlamaanka Galmudug oo shiray ayaa ku dhawaaqay in ay codka kalsoonida kala laabteen Madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo hadda kusuagn magaalada Muqdisho,laakiin Madaxweyne Guuleed wuxuu ka hor yimid go’aankaas.
Warsidaha Puntlandtimes ayaa helay waraaqo hoose oo ay isku direen kooxo Siyaasadeed oo kajira gudaha Galmudug iyo meelo ka baxsan oo ay uga hadlayaan riditaanka Madaxweynaha Galmudug iyo waxa loogu soo beegay xiligan.
Sida ku cad waraaqahan wuxuu qorshuhu ahaa in xilka qaadistan la sameeyo horaantii bishan, laakiin waxaa ka hortagey Madaxweyne kuxigeenka Galmudug iyo Afhayeenka baarlamaanka oo awood ciidan adeegsaday.
Siyaasiin saameyn weyn ku leh Galmudug ayaa wax ka qorsheeyey arrintan, sidaas oo kale waxaa ku jira Hogaamiyaasha Siyaasadda ee hadda tartanka uga jira magaalada Muqdisho.
Saameynta arrinta waxaa ku leh dawladdaha jaarka ah qaarkood, gaar ahaana dawladda Itoobiya oo danaheeda siyaasadeed ka dhex arki weyday Galmudug, gaar ahaana doorashada Muqdisho.
Mr, Guuleed wuxuu si toos ah u diiday qorshe ku saabsanaa in Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya loo doorto shaqsi ka soo jeeda Beesha Daarood, sida ay sheegayaan warar hoose oo laga helayo Muqdisho.
Warqaddahan loo soo dusiyey Puntlandtimes.com waxaa cad in ay arrimahan ay lug ku lahaayeen shaqsiyaad kamid ah Golayaasha Shacaka & Aqalka Sare ee dawladda Faderaalka.
Kooxda Aala Sheekh ayaa baasiin kulul u isticmaashay qadiyadda Cadaado, maadaama ay shaqsiyaad kamid ah horay tartanka uga qeybgaleen, oo looga guuleystay Doorashada Madaxtinimada Galmudug.
Xogtu waxay kaloo sheegaysaa in qorshaha xilka qaadista Cabdikariim Xuseen Guuleed ay saameyn xoog leh ku leedahay loolanka siyaasadeed ee kasocda magaalada Muqdisho, iyadoo ujeedadu tahay kooxda Aala Sheekh oo weyday Xildhibaanada Galmudug oo taas laftigeeda Isticmaashay.